▷ 🎮 Evergate 【Ntụle na nbudata ✅】 - 【Ntụnyere】 2022
🎮 Evergate 【Ntụle na budata ✅】
Evergate bụ akụkọ ifo na-atọ ụtọ nke ji nkenke na amara na-enyocha omimi nke ọrụ nka ya.
Evergate tụrụ m n'anya. Na mbụ ọ dị ka ewepụtara ntakịrị site na Ori na ọhịa ìsì, enwere m mmasị na myirịta ndị ahụ, ọ bụghị n'agbanyeghị ha. N'ezie, àgwà ya na Ori bụ nke elu elu, na ike ya na-elekwasị anya na akụkụ mgbagwoju anya nke ụdị ikpo okwu mgbagwoju anya na-eme ka ọ bụrụ ahụmahụ bara ụba na nke dị iche.
Ị na-egwu dị ka Ki, obere wisp nke na-ebi ndụ mgbe a nwụsịrị ma na-echere ịlọ ụwa ka ọ na-aga na Evergate. Mgbe nsogbu na-eyi egwu imezi ndụ niile mgbe a nwụsịrị, Ki na-enyere aka ịgafe Evergate iji chegharịa ihe ncheta ndị bụ isi site na oge wee kpughee ihe omimi dị n'azụ ọdachi na-abịanụ. Ọ bụrụ na echiche a na-ada na-egbu egbu, ọ bụ. Egwuregwu ahụ anaghị enye gị ohere dị ukwuu ịmalite, yabụ ị na-etinye awa ole na ole mbụ iji rụgharịa akụkọ ifo egwuregwu ahụ. Ndị na-eme ihe nkiri na-atụba okwu n'efu na-enweghị nkọwa, ma ọ dịịrị gị ijide ha.
Nko egwuregwu isi na-adị ka otu n'ime igwe eji arụ ọrụ ikpo okwu na egwuregwu Ori. N'ime ndị a, mmegharị "Bash" na-enye gị ohere ịgbapụ ihe n'ime ikuku, na-agbapụ n'akụkụ ụfọdụ. Evergate na-eji otu echiche ahụ bụ isi, mana na-enyocha omimi dị ka olulu mmiri miri emi nke igwe mgbaghoju anya. Egwuregwu ahụ dum dabeere na usoro ọnụ nke nwere mmetụta dị iche iche, ọ bụrụhaala na ị nwere ahịrị anya doro anya na ihe na-acha ọcha ethereal ma ọ bụ ala. Ka ị na-aga, ịchọta ahịrị ndị ahụ na-ahụ anya na ịchọpụta usoro ọnụ ka ọ ga-esi na-adịwanye mgbagwoju anya, na-abụkarị acrobatic, ka ị na-eji usoro nbibi oge iji kwadoo ogbugba gị n'etiti ikuku.
Ihe okike nke Evergate sitere n'ụdị ọnụ dị iche iche dị iche iche, nke a na-akpọ kristal na egwuregwu ahụ, yana otu enwere ike iji ha mepụta egwuregwu mgbagwoju anya. Ebumnuche gị ka bụ ịbanye n'ọnụ ụzọ nwere akara, mana ọ ka na-enweta ma ọ bụ gbochie ya site na mgbochi. Njikwa dị n'elu ikpo okwu dị mfe mana ọ bụ ihe okike, ebe ọ bụ na mwụli elu nwere oke ise n'elu mmiri na-eju afọ nke dabara na animation dike dim. Mana kristal bụ ngwa igodo igodo, nwere mmetụta dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị kwadoro ihe karịrị otu n'otu oge.
Ọnụ ụzọ kachasị dị mkpa na-akpali gị n'otu ụzọ dị ka Ori, ebe mmadụ nwere ike ịmalite ọkụ iji gafee ihe mgbochi na onye ọzọ na-emepụta oghere okirikiri nke ị nwere ike iji gbawa n'akụkụ ọ bụla. Nke ọ bụla n'ime ụwa 10 ahụ nwere ọrụ igwe mgbaghoju anya nke ọhụrụ na nke na-emepe emepe kpamkpam, na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmụta ihe ọ pụtara tupu ijikọta ya na ndị ọzọ ị hụburu. N'ikpeazụ, ị ghọrọ onye ọkachamara n'ezie na mmetụta nke kristal ọ bụla, ọ na-enye afọ ojuju ịhazi ụzọ site na ihe mgbochi nke ogbo, na-atụba onwe gị n'etiti eriri ma na-emetụ ala.
N'agbanyeghị Evergate bụ ihe mgbagwoju anya n'obi, ọ na-ewe ọkara nke abụọ nke aha ahụ ka ọ dị mkpa. Ịhazi ụzọ gị abụghị ihe ọ bụla na-enweghị ogbugbu. Ka ị na-aga na usoro ndị na-esote, ọbụlagodi mgbe ị matara ngwọta ahụ, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ nkenke nke ọma iji dozie nzọụkwụ ahụ wee ruo na ọpụpụ ahụ. Ọ bụ n'oge ndị a ka a na-anabata njikwa ọma nke ọma. Agbagharala m usoro ugboro ugboro karịa ka m nwere ike ịgụta ọnụ, mana ọ bụ mgbe niile ka ọ bụ m kpatara na m na-atụfu oge maka ntutu isi.
Site na ọdịdị nke mgbọrọgwụ ikpo okwu ya, Evergate na-enwekwa mmetụta dị mma nke ukwuu. A na-ebukarị ụzọ chepụta egwuregwu mgbaghoju anya na, n'ikwu ya n'ụzọ sara mbara, ị ga-ahụ ka ụfọdụ n'ime usoro ndị a si nwee otu usoro. Ma mgbe ụfọdụ, ị ga-ahụ ụzọ nke doro anya na ọ gaghị aga dị ka e bu n'obi, na-arụ ọrụ gị site na eriri dị ka onye na-egwu jazz, na usoro ndị ahụ na-agbanwe nke ọma iji kwe ya. Enweghị ego ma ọ bụ ọganihu agwa, yabụ na mmalite nke ọkwa ọ bụla ị na-enwe ihe niile ịchọrọ.
Ụwa 10 ahụ bụ ihe ncheta dị iche iche gbasasịrị n'oge, na-akọ akụkọ banyere mkpụrụ obi abụọ dị n'otu, mana akụkọ ahụ bụ naanị ọkara ihe ịga nke ọma. E bu n’obi Evergate ka ọ bụrụ akụkọ ifo na-emetụ n’ahụ́ banyere otú ndị anyị hụrụ n’anya ga-esi emechu anyị ihu, na otú anyị kwesịrị isi na-enwe ndidi na obiọma n’ịgbalị ịhụ ụwa n’anya ha iji ghọta otú anyị si emechu ha ihu. Mgbe ị na-ezisa ozi a site na mkparịta ụka, ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Mana a na-akọ ọtụtụ n'ime akụkọ ahụ site na vignettes dị mkpụmkpụ, na ihe na-eme ebe ahụ anaghị edocha anya mgbe niile. N'etiti enweghị nkọwa doro anya na usoro akụkọ akụkọ ndị a na ngosi nke akụkọ ahụ na mgbasa ozi, ọ na-esiri ike ijikọ ya na ndị odide ma ọ bụ esemokwu ruo mgbe egwuregwu ahụ fọrọ nke nta ka ọ gwụ.
Gburugburu onwe ya adịchaghị iche karịa ka ị ga-eche maka egwuregwu sitere na ubi ndị China ruo neon nke ọdịnihu dị nso. Akụkụ nke a bụ ngwaahịa nke ihe mgbagwoju anya, nke ga-edobe ụfọdụ asụsụ a na-ahụ anya site na ọkwa dị iche iche. A na-ekewa ego ahụ nke ọma, ma ebe ọ bụ na ị na-elekwasị anya na ikpo okwu, ị naghị eche na ị na-eme njem n'oge dị iche iche. Ihe kacha pụta ìhè bụ ọdịnihu, nke na-egosipụta ihe dị ka robot drones na mpaghara mmanye na-ebelata ikike gị.
N'ozuzu, Otú ọ dị, Evergate maara nke ọma. Ọ bụ ọgwụgwọ dị mkpụmkpụ, na-atọ ụtọ site na egwuregwu mgbe niile na-emepụta ụzọ ọhụrụ nke imekọrịta ihe na ụwa na ịgwakọta ihe egwuregwu, na-eme nnwale na-eju afọ nke ọgụgụ isi na ntụgharị uche.
Otu esi ebudata Evergate